AirTies Air 4920 Smart Mesh Manual Manual - Manuals +
Tilmaamaha Isticmaalaha oo La Fududeeyey.
Bogga ugu weyn » AirTies » AirTies Air 4920 Smart Mesh Manual Manual
AirTies Air 4920 Smart Mesh Manual Manual
April 26, 2018 April 27, 2018 10 Comments oo ku yaal Buugga Isticmaalaha AirTies Air 4920 Smart Mesh
1 AirTies Air 4920 Smart Mesh Manual Manual
1.1 Tilmaamaha Hagaajinta Degdegga ah
1.1.1 Buugaag / Ilaha la xidhiidha
Tilmaamaha Hagaajinta Degdegga ah
CODSIGA SAHAN: ACCESS POINT
1. Meel mid ah Air 4920 ku dheji router-kaaga oo ku xir labada iyaga oo isticmaalaya Ethernet-ka ku lifaaqan
fiilada (fur jaale ah)
2. Ku xir qalabka Air 4920 qalabka korontada ku shaqeeya oo dhagsii furaha korontada.
3. Sug ilaa labada 5 GHz iyo 2.4 GHz LEDs ay cagaar adag yihiin Tani waxay qaadan kartaa ilaa 3 daqiiqo.
4. Hadda, waxaad ku xidhi kartaa aaladaha mobilada shabakadaada wireless-ka cusub.Factory network network default iyo password ayaa lagu calaamadeeyay salka qalabka.
- Macaamiil kasta (tusaale ahaan laptop, taleefan ama kiniin),
ku xir shabakadda calaamadda.
- Gali lambarka sirta ah ee shabakadda markii laguu sheego.
5. (Ikhtiyaar) Waad beddeli kartaa magaca shabakadda (SSID) iyo lambarka sirta ah ee shabakaddaada.
Ku xir shabakadaada, fur web biraawsarka oo ku qor “http: //air4920.local”
cinwaanka cinwaanka. Soo gal oo ka deg dariiqa bidix ee DEGDEG SETUP. (Furaha galitaanka asalka ah waa banaan yahay.)
Kordhi Daboolidaada WiFi (MESH):
Diyaarinta: Isku xirka Hawada cusub ee 4920
1. Qolka uu ku yaal router-ku, dhig hawo cusub 4920 fogaan ah ilaa saddex
mitir u jira aaladda hadda jirta ee Air 4920, ku xir khadka korantada oo sug illaa inta 5 GHz iyo 2.4 GHz LEDs ay ka soo ifbaxayaan cagaar (4 ilbiriqsiyo AH, 4 ilbiriqsiyo LAGA SAMEEYO). Tani waxay qaadan kartaa ilaa 3 daqiiqo.
2.a Riix badhanka WPS hawada jirta 4920 (ku xigta routerka) 2 ilbidhiqsi iyo
ka dibna hawada cusub 4920 muddo 2 ilbidhiqsi ah (2.b).
5 GHz iyo 2.4 GHz LEDs bilow inaad iftiimiso oo qalabku si otomaatig ah ayuu ugu xirmaa Nidaamkani wuxuu qaadan karaa ilaa shan daqiiqo. Xiriirinta waxaa la aasaasay mar Laydhka ayaa iftiiminaya cagaar (The 5 GHz LED ayaa si kooban u demin doona 5tii ilbiriqsiba mar).
Hambalyo waxaad si guul leh u qaabeysay aaladdaada cusub. Aqoonsigaaga shabakadeed ee hadda jira ee Air 4920 waxaa si otomaatig ah loogu habeeyay Air 4920-kaaga cusub.
Fiiro gaar ah: Haddii 5GHz LED-ka aaladda cusubi uusan ku ifinaynin cagaar shan daqiiqo gudahood,
fadlan ku celi talaabada 2.
Dejinta Air 4920 qolka aad dooratay
3. Hawada cusub ee 4920 hadda waa laga saari karaa oo la dhigi karaa qolka aad dooratay.
Xidhiidhka ayaa loo dhisi doonaa si otomaatig ah. Nidaamkani wuxuu qaadan doonaa ilaa saddex daqiiqo.
Fiiro gaar ah: Haddii 5 GHz LED uusan ifin iftiin cagaaran (The 5 GHz LED wuu damin doonaa si kooban hal mar oo kasta)
5 ilbidhiqsi) seddex daqiiqo gudahood, fadlan la tasho cutubka «Dhibaataynta dhib» (bogga 5).
4. (Ikhtiyaar) Hadda, waxaad kuxiran kartaa aaladaha fiilooyinka leh (tusaalahan horeample, Sanduuqa Set-Top) ee Hawada 4920 iyadoo la isticmaalayo fiilada ethernet (fur jaalaha ah).
5. (Ikhtiyaar) Waxaad ku dari kartaa hawada 4920s dheeri ah shabakadaada adoo ku celcelinaya talaabooyinka 1.
Hagaajinta caymiska wireless
Haddii aad jeclaan lahayd inaad hagaajiso daboolida bilaa -waayirka ee qol kale, waxaad samayn kartaa Hawo 4920 oo dheeraad ahampama STB, kombiyuutar ama qalabka ciyaarta).
Hagaajinta kala duwanaanta
Haddii goobta aad rabto inaad daboosho ay aad uga fogtahay hawadaada jirta 4920, waxaad rakibi kartaa Air 4920s dheeri ah si aad halkaas u gaarto.
TALOOYINKA KU SAABSAN GUUD
- Demi adeegga siligga ah ee 'modem' kaaga.
- Ka fogee cutubyada:
- Ilaha suurtagalka ah ee faragelinta korantada. Qalabka sababi kara faragalinta waxaa ka mid ah taageereyaasha saqafka, nidaamyada amniga guriga, microwaves, PC, iyo taleefannada aan xadhkaha lahayn (taleefanka gacanta iyo saldhigga).
- Meelo bir ah oo waaweyn iyo walxaha. Walxaha waaweyn iyo sagxadaha ballaaran sida muraayadaha, darbiyada dahaaran, taangiyada kalluunka, muraayadaha, lebenka, iyo darbiyada shubka ayaa sidoo kale daciifin kara astaamaha wireless-ka.
- Meelaha iyo meelaha kuleylka ah sida foornooyinka iyo qolalka qorraxda iyo sidoo kale iftiinka qorraxda ee tooska ah xitaa haddii ay jirto hawo wanaagsan.
-Sidoo kale, waxaa aad loogu talinayaa in sahayda korontada ee aan kala go 'lahayn (UPSes) (ama, ugu yaraan, ilaaliyayaasha qallafsan) loo isticmaalo in lagu ilaaliyo Hawada 4920 iyo aaladaha kale ee korontada (moodeelka VDSL, marin-hayaha/irdaha, sanduuqyada sare, TV-yada, iwm. ) khataraha korontada. Dabaylaha korontada, voltagkororka e iyo khataraha kale ee la xiriira shabakadda korontada ayaa dhaawac weyn u geysan kara qalabka korontada. Intaa waxaa dheer, xitaa hal ilbidhiqsi 1 ilbidhiqsi ee korontada waxay u badan tahay inay sababto in dhammaan modemyada, macaamiisha bilaa wirelesska ah, TV-yada, sanduuqyada sare, iwm la damiyo ama dib loo dejiyo. Xitaa haddii qalabku si otomaatig ah u bilowdo, waxay qaadan doontaa dhowr daqiiqo ka hor inta dhammaan nidaamyadu ku soo laabtaan internetka oo ay kuu oggolaadaan inaad ku raaxaysato adeegyada ku saleysan Internetka.
- U noqoshada goobaha warshadaha:
Si aad ugu soo noqotid cutubyada goobaha warshadda, hoos u riix batoonka dib-u-dejinta (furitaan yar oo xagga dambe ah) muddo 10 ilbidhiqsi ah. Waraaqaha birta ah ee birta ah (oo leh caarad dheeri ah) ama caday adag ayaa caadi ahaan xulashooyinka hawshan u wanaagsan. Marka hawsha dib-u-dejintu ay kiciso, LED-yada xagga hore ayaa si ku-meel-gaadh ah "u dhalaalaya" cutubkuna dib ayuu u bilaabi doonaa (qiyaastii 3 daqiiqo) ilaa goobaha warshadda.
- Haddii aad shakhsiyeeysid goobaha shabakadda, fadlan ku qor iyaga:
Magaca Shabakadda: ………………………………………………………………
Furaha Shabakada: …………………………………………………………
Furaha Is-dhexgalka Isticmaalaha: ……………………………………………… ..
Badeecadani waxay isticmaashaa softiweer ay soo saareen bulshada isha furan. Mid kasta oo ka mid ah software -kan oo kale ayaa shati ku leh shuruudaha shatiga gaarka ah ee khuseeya software -kaas gaarka ah (sida GPL, LGPL iwm). Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan ruqsadaha la adeegsan karo iyo shuruudaha shatiga ayaa laga heli karaa is -dhexgalka isticmaalaha aaladda. Adigoo adeegsanaya badeecadan, waxaad qiraysaa inaad dib u heshayviewed shuruudaha shuruudaha liisanka iyo inaad oggolaato inay ku xidhaan. Meesha shuruudaha noocaas ahi kuu oggolaanayaan koodhka isha ee software -ka la sheegay, koodhkaas isha ayaa lagu heli doonaa kharash ahaan marka la codsado AirTies. Si aad u hesho nuqul ka mid ah koodhka isha, fadlan u soo dir codsigaaga qoraal ahaan emayl ahaan [emailka waa la ilaaliyay] ama boostada snail ee: AirTies Communications Wireless Gulbahar Mah. Avni Dilligil Sok. Maya: 5 Celik Is Merkezi, Mecidiyeköy, 34394 ISTANBUL / Turkey AirTies ayaa kuu soo diri doonta CD ay ku qoran yihiin lambarka isha laga codsaday $ 9,99 oo lagu daray qiimaha dhoofinta. Wixii faahfaahin ah fadlan la xiriir [emailka waa la ilaaliyay]
Buugaag / Ilaha la xidhiidha
Buugga Isticmaalka Isku-xirka Internetka ee Mesh Bluetooth
Buugga Isticmaalaha Isku-xidhka Mesh ee Bluetooth - Buugga Isticmaalaha Isku-xidhka Mesh ee PDF ee la Habeeyay - PDF asalka ah
Buugga isticmaalaha ee SHARP Air Conditioner
Gelius AIR TWS Manual Isticmaalka Buugga
Buugga Isticmaalaha Gelius AIR TWS Madax-madaxeedka Gelius AIR TWS - Buug-isticmala oo la hagaajiyay PDF Gelius AIR TWS…
Buugga Isticmaalka Nidaamka Hawada ee Hisense
Nidaamka Nidaamka Qaboojiyaha Hawada ee Hisense Adeeg-gacan qabasho-hisense-cusub-raaxo-wandmodel-Fiican
April 26, 2018 April 27, 2018 Posted inAirTiesTags: Air 4920, AirTies, buugga isticmaalaha
air4920.local [Soo galitaanka Router]
Faisal wuxuu leeyahay,
November 16, 2018 at 12: am 51
Ma heli karo erayga sirta ah ee aan ku geli karo fidiyaha, sida ku xusan buuga sirta ayaa ah buste, waan isku dayay tan mana aanan helin marinka, waxaanan raadiyaa lambarka sirta ah ee caadiga ah mana aanan helin xirmo ah ama fidiyaha laftiisa.
Aseel wuxuu leeyahay,
badhanka nasashadeyda waa la jabiyey ee sidee baan ugu nasan karaa badhanka la'aantiis? ......
mana jirto cid u imaaneysa oo guriga ku hagaajineysa…
gigi wuxuu leeyahay,
May 20, 2021 at 3: am 18
Waxaad sidoo kale dib uheli kartaa adoo riixaya badhanka WPS 10 ilbidhiqsi
Mary Buckman wuxuu leeyahay,
June 25, 2020 at 7: am 54
Mar dambe ma iibsan doono kuwan! way wanaagsan yihiin markay si sax ah u shaqeynayaan, laakiin markii ay hoos u dhacaan ma jiro qof caawimaad weydiista waxaan isku dayay inaan waco lambar kasta oo aan helo.
Ron wuxuu leeyahay,
October 16, 2020 at 6: 29 pm
AirTies 4920 kordhiye ma ka shaqeyn karaa shabakad mesh ah oo leh AirTies 4921 kordhiye?
Kelvin Miller wuxuu leeyahay,
November 22, 2020 at 4: am 16
Waxaan hayaa 2 qaybood oo airties ah. Mid jaranjarooyinka kor u socda iyo qaybta ugu weyn ee ku xiran modemka jaranjarada. Waxaan haystaa midda kore ee ku xigta kuuskeyga dabka laakiin kuubku wuxuu kaliya ku xirmi doonaa kan hoose ee jaranjarada. Waxay u egtahay in dhowr shey goobta ay isku xirayaan jaranjarooyinka halkii mid jaranjarada ah. Ma jirtaa hab lagu qasbo alaabtaan inay ku xirmaan qaybta xirmeysa?
Andy Mulchek wuxuu leeyahay,
December 1, 2020 at 4: 02 pm
Ma ihi taageero, laakiin fahamkaygu wuxuu yahay in cutubka ku xiran modemku uu aasaaso shabakadda, isla markaana laga wada isticmaali doono guriga oo dhan. Cutubyo dheeri ah ayaa kor u qaadi doona calaamadda, waxayna fidin doonaan shabakadda laga asaasay cutubka bilowga ah. Marka, waxaad kuxirantahay shabakada laga aasaasay cutubka bilowga ah, cutubka dheeriga ahna wuxuu kuu kordhiyaa calaamadda adiga.
Mark wuxuu leeyahay,
Waa maxay biinka WPS ee AirTies Air 4920
Skipper wuxuu leeyahay,
September 11, 2021 at 5: 34 pm
Ma ihi maamulaha guddigan. Tani waa waxa aan maanta bartay. Muddo laba sano ah waxaan si guul leh u isticmaalayay laba AirTies 4920 unug, oo aan u iibsaday sidii xirmo laba-geesood ah (sidaa darteed labadooduba waxay leeyihiin isla magaca wifi-ga iyo furaha sirta). Rakibaadda asalka ahayd way fududahay.
Maanta waxaan ku daray qayb saddexaad 4920. Kahor intaanan bilaabin, labadii cutub ee asalka ahaa ayaa shaqeynayay (badhanka 5 GHz ayaa gariiri jiray 5 ilbidhiqsi kasta). Laptop-kayga, waxaan ku arkay hal tusaale oo ka mid ah magaca wifi-ga ee warshadu samaysay, waxaanan ku xiriiri karaa si bilaa wireless ah aniga oo isticmaalaya furaha sirta ee warshadda. Waxaan sidoo kale ku xiri karaa labada unug mid kasta oo isticmaalaya fiilada ethernet.
Waqtigan xaadirka ah kumbuyuutarkeygu wuxuu sidoo kale arki karaa cutubka saddexaad ee ku shaqeeya liistada shabakadda wifi, laakiin kuma xiriirin karo aniga oo adeegsanaya magaca wifi-ga iyo lambarka sirta ee kala duwan. BTW, mar uun, waxaan dib u dejiyaa dhammaan saddexda cutub ee goobahooda warshadda anigoo isticmaalaya xaashi warqad ah oo ku jirta daloolka Dib -u -dejinta ee u dhow xarigga korontada, laakiin taasi waxay u badan tahay inay lagama maarmaan u ahayd unugga saddexaad oo aan iibsaday “si tartiib ah loo isticmaalay”.
Qeybta 4920 ee ku xiran fiilada ethernet -ka ee router -ka, waa sayidka. Si aan ugu daro cutubka saddexaad, waxaan ku xoojiyay qiyaastii 5 cagood oo ka tirsan unugga sayidka. Ma jiro fiilo ethernet ah oo ku xidhan cutubka saddexaad. Waxaan cadaadiyey 2 ilbidhiqsi badhanka WPS ee qaybta sayidka. Kadib waxaan ku cadaadiyey cutubka saddexaad badhanka WPS 2 ilbidhiqsi. Waxaan sugayay 3-5 daqiiqo, labada cutubba badhanka '5 GHz' wuxuu bilaabay inuu gilgilo 5 ilbidhiqsi kasta (cutubka saddexaad wuu dheeraaday). Waqtigaas, hadda oo leh saddex unug oo la shiday, kombiyuutarkeygu wuxuu arkay oo kaliya magaca wifi ee qeybta sayidka (midka ku xiran siligga router).
Isticmaalka maamulaha router -ka web Bogga, waxaan arki karay in router -ka uu arkayay dhammaan saddexda unug (mid kasta oo leh cinwaan IP oo kala duwan). Adigoo adeegsanaya cinwaanka MAC ee ku yaal bogga maamulaha router -ka iyo xagga hoose ee qeybta sayidka, waxaan aqoonsaday cinwaanka IP -ga ee qeybta sare. Kadibna laptopkayga, waxaan ku galay cinwaanka IP -ga tab biraawsar cusub, taasina waxay ii saamaxday inaan beddelo magaca wifi iyo furaha sirta ah. Waad dhammaatay (ha isku dayin inaad beddesho magaca wifi iyo furaha sirta labada cutub ee kale).
Hadda, anigoo saddexda wada shaqeynaya, waxaan ku dhex socon karaa aaladayda mobilada waxayna si otomaatig ah ugu xirmaan cutubka leh signalada ugu xoogga badan. Aad u qabow oo waxtar leh. Waxaan jeclaan lahaa inaan sidan sameeyay laba sano ka hor.
Waxaan sii waday wifi -ga router -ka. Aniga aniga kama arko faragelin, sidaas darteed waxaan u hayaa gadaal, kaliya haddii ay tahay inaan dib ugu laabto wifi -ga router -ka. BTW, xaaladdayda, signalka wifi ee saddexda unugba aad buu uga xoog badan yahay router -ka, xawaaraha bilaa -waayirkuna laba jeer ayuu ka dhakhso badan yahay, kor iyo hoosba.
January 14, 2022 at 2: am 28
Suurtagal ma tahay in la isticmaalo fidiyaha kala duwan ee router dhinac saddexaad ah? Waxaan u baahanahay inaan ogaado waxa uu yahay koodka pin-ka ee WPS qofna ma yaqaan?
Badbaadi magacayga, emailkayga, iyo webgoobta ku jirta biraawsarkan marka xigta ayaan faallo ka bixinayaa.
AJAX 8706 Keypad Wireless Taabashada Kiiboodhka Isticmaalaha
Meizhou Hongfeng Farshaxanka Farshaxanka 266285 BJ 57IN Snowman oo wata buuga tilmaamaha
AJAX 7661 StreetSiren Wireless Outdoor Siren Buugga Isticmaalaha
AJAX 17938 12V PSU ee Hub/Hub Plus/ReX Buugga Isticmaalaha Cutubka Korantada
Gudbiyaha AJAX 10306 Ku Xidhan Buugga Isticmaalaha Beddelka Baadhaha Wireless
MARK L PETERKA on ZERFUN G8 Pro Buugga Isticmaalaha Nidaamka Makarafoonka Wireless-ka
Kurt on Airrex infrared kululeeyaha AH-200/300/800 Manual Manual
2017 Toyota Camry Hybrid LE Fuse sanduuqa jaantusyada on Sawirka Sanduuqa Fiyuuska Rakaabka ee Toyota Camry
2017 Mitsubishi Lancer 4WD Fuse Box Jaantusyada on Jaantuska Mitsubishi Lancer iyo Jaantuska Fiyuuska Fiyuuska
K Townsend on Mira Honesty ERD Bar Valve iyo Qalabka Isticmaalka Qalabka